KSL Medical Company
“အမျိုးသားတိုင်းအတွက် Biomanix Plus “
BIOMANIX PLUSအမျိုးသားအားဆေးသည်သဘာဝherbal ဆေးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး လွန်စွာတန်ဖိုးကြီးသောဆေးအမျိုးအစားများစွာပါဝင်သော multi vitaminအမျိုးသားဟိုမုန်းတိုး အိမ်ထောင်ရေးသုခအားဆေးဖြစ်ပါသည်။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများရလဒ်ဟာ ယခင်သုံးစွဲခဲ့ဖူးသောအားဆေးများစွာထက် သာလွန်ကောင်းမွန်နေပါတယ်။
✔️ပန်းသေ ပန်းညိုးရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး
အပြင်သွေးတိုး နှင့် ဆီးချိုသမားများအတွက်…………သုံးစွဲရန် အလွန်အဆင်ပြေစေတဲ့အတွက်ဝယ်ယူသုံးစွဲရသော ဆေးတန်ဖိုးသည်ကျန်းမာရေးရှု့ထောင်ကကြည့်လျှင် များပြားသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ premium product ဖြစ်ပြီးဓါတုဆေးလုံးဝကင်းစင်သောHerbal supplementစစ်စစ် ဖြစ်ပါသည်။ဆေးတောင့် capsules (60) ပါဝင်ပြီးတနေ့လျှင် သုံးစွဲသူ၏ ဟိုမုန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ် မူတည်၍တစ်လုံးမှ သုံးလုံးအထိ အစားနှင့်ဝေးဝေးရေများများဖြင့်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Biomanix plus ဟိုမုန်း ကျားခွန်အားတိုးအားဆေးဟာ အခြားသော ဓါတုဆေးဝါးများလို ခုသောက် ခုအစွမ်းပြတဲ့ဆေးမဟုတ်ဘဲ herbal ဆေးစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဆေးသုံးစွဲပြီးနောက် တရက်ထက် တရက် ထူးခြား စစ်မှန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ABHဆေးကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အထူးထုတ် အမျိုးသားအားတိုးဆေး Biomanix Plusကို မန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် တင်သွင်းရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးfda ခွင့်ပြုမိန့် (2019-B-1/1221)ဖြင့်စိစစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောတရားဝင် product ဖြစ်ပါသည်။
➡️ Biomanix Plus ကဘယ်လိုဆေးလည်း ?
ဟုတ်ကဲ့- အမျိုးသားတွေရဲ့ အသက်တမျှ အရေးကြီးတဲ့ ဟိုမုန်းအားတိုးဆေးဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်စေ ♥️စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်စေ 💓အလုပ်အကိုင်ကြောင့်ဖြစ်စေ ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးခံစားရပြီးလိင်မှုရေးရာမှာ အဆင်မပြေသူများအတွက် အထူးသုံးစွဲသင့်သောဆေးဖြစ်ပါတယ်။💓ဒါ့အပြင် ပန်းသေခြင်း ပန်းမလန်းခြင်း သုက်အားနည်းခြင်း သားသမီးမထွန်းကားခြင်းများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အဝခံစားလိုသူများ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
➡️ ဟိုမုန်းတမျိုးတည်းပဲေ ကာင်းတာလား……????
အမျိုးသားဟိုမုန်းအတွက်သာမက လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဗီတာမင် သတ္တုဓါတ် အမျိုးပေါင်း သုံဆယ်ကျော်ဖြင့်အထူးဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်
သွေးတိုးဆီးချိုရှိသူ၊အရိုးအဆစ်အားနည်းသူ၊သွေးအားနည်းသူများ နှင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းသူ၊မေ့တတ်သူ ၊စိတ်အားငယ်သူစိတ်မတည်ငြိမ်သူများနှင့် အဖုအကျိတ်ရောဂါဟုခေါ်သာကင်ဆာကဲ့သို့သောရောဂါဝေဒနာများအတွက် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။✔️
➡️ ဒီဆေးထဲမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတုဆေးတွေပါသလား??
သဘာဝဆေးဥ ဆေးမြစ်စစ်စစ်များကိုသာ extrect နည်းဖြင့် စနစ်တကျဖော်စပ်ထားသော herbalဆေးစစ်စစ်သာဖြစ်လို့ သုံးစွဲသူများအတွက် လုံးဝစိတ်ချရပါတယ်။
➡️ ဒီဆေးသုံးပြီး ဘာတွေထူးခြားလာမလည်း??
ဟုတ်ကဲ့ – အိမ်ထောင်ရေးသုခကို အထူးပြည့်စေပြီးဦးနှောက်စွမ်းရည် ကိုယ်ကာယစွမ်းရည်များ ထူးခြားတိုးတက်လာစေပြီ ကျန်းမာအောင်မြင်သော ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။♥️♥️
➡️ ၀ယ်ချင်တယ် online shopတွေကိုမယုံကြည်ဘူး?
ဟုတ်ကဲ့- online shopမဟုတ်ဘဲ companyမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးသော product ဖြစ်လို့ ကုမ္ပဏီနဲ့ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ရုံးခွဲများမှာ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့- ဆေးတောင့်ခြောက်ဆယ်ပါပြီးနံနက် အိပ်ယာထတလုံး ညစာမစားခင်တလုံးရေဖြင့်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးတဗူးလျှင် ၁၂၅၀၀၀(တသိန်းနှစ်သောင်း ငါးထောင်)ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
“BIOMANIX PLUS ရဲ့ အစွမ်း အကျိုးကျေးဇူးများ”
(1) အလ်အာဂျင်နင်း သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော နိုက်ထရစ် အက်ဆစ် ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တက်စေပြီး အမျိုးသားအင်္ဂါ ရှိ သွေးကြောများ လှည့်ပတ်စီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေကာ လိင်တံ ကိုကြီးထွားစေပါသည် ။
(2) Aswagandha -အမျိုးသားများသည် အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ ‘ကျား’ ဟော်မုန်းများ တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာပါသည်။အိန္ဒိယဂျင်ဆင်း ဟု လူသိများသော Aswagandha ပါဝင်သောကြောင့် ‘ကျား’ ဟော်မုန်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး မျိုးအောင်မှုစွမ်းအား ကိုလည်း ကူညီ အားဖြည့်ပေးပါသည်။
(3)ဂျင်းဆင်းကတော့ လူတိုင်းသိပြီး ဂျင်ဆင်းရဲ့အာနိသင်များက-ဟိုမုန်းကိုတိုးမြင့်ပေးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေတယ်။အာရုံကြောရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းနဲ့ကျောရိုးမကြီးတလျှောက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ရောဂါများကို ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။
(4) ဖောလစ်အက်စ်*(folic acid)လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင် ဖောလစ်အက်စစ်သည်သွေးနီဥများထုတ်လုပ်ရာတွင် လွန်စွာအရေးပါပါသည်။ဖောလစ်အက်စစ်နည်းပါက သွေးအားနည်းခြင်း၊မောပမ်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။ ဖောလစ်အက်စစ်ကို ဘယ်ကရမလည်း ?အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဆန်လုံးညို ၊အသည်း၊အာလူးစသည်တို့မှရသော်လည်း ထိုအစားအစာတို့ကို နေ့စဉ်လုံလောက်စွာစားသုံးရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ biomanix plusတွင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောဖောလစ်အက်စစ်ပမာဏ ပါဝင်ပါသည်။
(5)magnesiumဓါတ်သည် သွေးတိုးကိုကျစေပြီး နှလုံးတုန်ရင်တုန်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။အူလမ်းကြောင်းကိုကျန်းမာစေပြီး၊အရိုးကိုကြံ့ခိုင်သန်မာစေသည်။ အသက်ရွယ်ကြီးမြင့်သူများအတွက် မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓါတ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေသည်။magnesiumဓါတ်(85)ရာခိုင်နုန်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ တစ်ရှုးထဲမှာရှိနေတတ်ပြီး ကျန်(15)ရာခိုင်နုန်းကသာ သွေးထဲမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် မဂ္ဂနီဆီယမ်ပြည့်စုံနေပါက ရောဂါများစွာကို ခုခံနိုင်ပေသည်။
(6) ဆူလေးငယ်ပင်လို့ ခေါ်တဲ့ Tribulus Terrestrisဆေးပင်သည် ကာမကိုအားပေးသည် သုက်ကိုပွားစေသည် သုက်ထွက်မြန်ခြင်းကို ထိန်းပေးပြီး ဆီးရွင်စေသည်။ဆီးရောဂါအမျိုးမျိုကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီးလိင်စိတ်ကိုနိုးကြွစေလို့ လိင်စိတ်အားနည်းသာများသောက်သုံးသင့်သည်။
(7) maca rootဆေးပင် ဆေးမြစ်ကိုextractနည်းဖြင့် အချိုးကျပေါင်းစပ်ပါဝင် ဖော်စပ်ထားပါသေးတယ်။မက်ကာဆေးရဲ့ ထူးခြားတဲ့အာနိသင်က ယောကျာ်းတို့အတွက်သက်လုံကိုအထူးကောင်းစေသည်။ကာမခွန်အားကိုတိုးပွားစေသည်။သွေးတိုးကို ကျစေသည်။အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးပြီး ရုပ်ကိုနုပျိုလန်းဆန်းစေသည်။✔️✔️✔️✔️✔️
(8) Panax Ginseng – ကိုရီးယား(Korea) အနီရောင်ဂျင်ဆင်း ဟု လူသိများသော Panax Ginseng သည် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကို မြင့်တက်စေရုံသာမက အမျိုးသား စိမ်းဆောင်ရည် ကိုလည်း အကောင်းဆုံး မြင့်တက်စေပါသည်။
(9)Vitamin E – စွမ်းရည်အထူးမြင့်မားပြီး အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့် Antioxidant တစ်ခုဖြစ်သော ဗီတာမင်အီးသည် သင့်ကျန်းမာရေးကိုသာမက ပြန်လည်နုပျိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေခြင်း၊ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးအစုံအလင်ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။
(10)Vitamin C – ကိုယ် ခံစွမ်းအားစနစ် ကိုမြှင့်တင် ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်စေကာ စိတ်ဖိစီးမှုများ ကိုလျော့ချပေး ပါသည်။
(11)Zinc -အမျိုးသား များအတွက် သုတ်ပိုး မအောင်ခြင်း ၊ သုတ်ပိုး အားနည်းခြင်းများ မဖြစ် ဆောင် ရွက်ပေးပါသည်။
သုံးစွဲနေစဉ်အချိန်မှာလည်း ထူးခြားကောင်းမွန်သော အစွမ်းများနဲ့ကျန်းမာရေး အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝရနိုင်သလို…နောက်ပိုင်း အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆီးကျိတ်ရောဂါ သွေတိုး ဆီးချိုရောဂါနှလုံးအားနည်းခြင်းများအယ်ဇိုင်းမားဝေဒနာများ နှင့်ပန်းသေ ၊ပန်းညိုးရောဂါများကိုလည်း 100% ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေဟာ Biomanix Plus တမျိုးထဲမှာသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
“တ နေ့ထက် တ နေ့ ပိုတိုးလာမယ် ခွန်အားတွေကို Biomanix Plus နဲ့ရယူပါ”